Shiinaha S307 Mashiinka calaamadeynta weelka xawaaraha sare Warshad iyo Warshad | S-conning
CODSIGA: calaamadeynta xawaaraha sare ee fijaannada iyo dhalooyinka kale ee yar-yar Hababka quudinta toosan iyo qaadidda weelasha yar yar ee loo qaado mashiinka wax lagu kala wareejiyo ayaa ku habboon dhalooyinka aan si adag u istaageyn oo si fudud hoos ugu dhacaya.
• Nidaamka firfircoon ee fur fur waxtar leh wuxuu hubiyaa fijaannada quudinaya xasilloonida dheeraadka ah iyo calaamadeynta saxnaanta sare ee dhammaan xawaaraha.
• Qaado qalabka diidmada dhululubo ee, hubiyo in si sax ah loo ogaan karo loona diidi karo badeecooyinka aan u qalmin marka mashiinku ku socdo xawaaraha sare
• Gaar ahaan khadka wax soo saarka budada ah ee loo yaqaan 'Lyophilized Powder', khadka wax soo saarka dawooyinka ee pharma iyo calaamadda dhalada ee cryo.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa wax ka badan intaad rabto
Nidaamka calaamadeynta oo ay maamusho shirkadda Siemens micro process PLC, hubinta waxqabad degdeg ah oo joogto ah.
Bixinta calaamadda waxaa wada mootada heerka adeegga (Yaskawa / Schneider / Honeywell) si loo hubiyo calaamadeynta saxsanaanta, waxtarka, iyo xawaaraha iyadoo ku yar isticmaalka tamarta. (Wixii dalbasho xawaare sare leh, mootada adeegga ayaa la dooran karaa)
Waxay u adeegsaneysaa heer sare oo heer sare ah oo fiber optics ah iyo dareemayaal infrared ah (Keyence / Lion / Dalsa / Sick / Leuze) si loo ogaado saxda ah iyo calaamadaha kiciya iyada oo aan la faragalin.
* Shaashadda taabashada HMI ee xirfadeed: shaashadda xakamaynta taabashada oo aad u badan
Calaamadeeyaha badan ee S307 Xawaaraha Sare wuxuu ku hubaysan yahay tiknoolajiyada cusub ee ugu dhakhsaha badan uguna xakamaynta netcon (ikhtiyaar). Hal guji oo keliya shaashaddiisa hal-taabashada ah, waxaad si fudud ugu hagaajin kartaa goobaha kala duwan ee alaabtaadu u baahan tahay.
Mashiinkayaga wata darawalada hawlwadeenada ayaa keenaya sax ahaanta saxda ah ee xawaaraha sare lagu calaamadeyn karo. Qalab hagaajiyeha gacan-ku-hayaha si fudud loo heli karo iyo hagaajinta tareenka dhinac isku xidha ayaa u oggolaanaya in ka badan "waqti-dheer" khadkaaga wax soo saar! S307 waxaa loo adeegsadaa dhammaanba warshadaha sida dawooyinka, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed, cuntooyinka, fiitamiinada, is qurxinta, iyo kiimikooyinka, halkaasoo kalsoonida ugu wanaagsan ee fasalka ay tahay waajibaadka waxsoosaar wax ku ool ah.
fududahay in la shaqeeyo iyo qaab dhismeedka is haysta: Jooji calaamadeynta marka aan shay la gelin, shayga booska si toos ah loo saxo marka aan midkoodna la calaamadeyn, iyo ikhtiyaarka baaritaanka tooska ah ee ikhtiyaariga ah.
Mashiinka oo dhan waxaa gacanta ku haya kombiyuutarka, si toos ah u ogaanshaha dhalooyinka bartilmaameedka leh calaamadee si isku mid ah, iyo qalab sidoo kale waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinka daabacaadda kulul
Qaado qaybinta jiifka ah, calaamadeynta suunka isku haynta casriga ah si loo hubiyo saxsanaanta iyo xawaaraha.
Buug-gacmeed lagu dhisay: dadka bilowga ah waxay wax ka baran karaan bandhigga ku saabsan sida loogu shaqeeyo mashiinnada muddo gaaban gudahood.
Tani waxay badbaadinaysaa lacag iyo waqti labadaba inta lagu jiro tababarka.
-Waxaa lagu dhisay buuga xallinta dhibaatada: bandhiggu wuxuu ku hagi lahaa isticmaalaha dhibaatada.
Qaybta tareenka Guide waxaa lagu sameeyaa aluminium tayo sare leh oo lagu daboolay balaastikado warshad adag leh si loo hubiyo calaamadeynta saxda ah iyo ilaalinta alaabada, iyadoo alaabada macaamiisha laga dhigayo mid soo jiidasho leh oo ku jirta xaalad kaamil ah.
Cabbir (L) 2600 x (W) 1500 x (H) 1800mm
Cabbirka weelka Φ13-40mm
Xawaare 400 ~ 800bpm
Hore: S308 Mashiinka sumadda weelka wareega ee xawaaraha sare
Xiga: Mashiinka Calaamadaha Diyaaradda
S-322 xiddig laba geesle ah oo calaamadeysan dhalada wareega m ...
Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada,